Xaaladda Xamar oo saakay Dagan iyo waan waan laga dhex bilaabay dhinacyada dagaalamay xalay | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Xaaladda Xamar oo saakay Dagan iyo waan waan laga dhex...
Xaaladda Xamar oo saakay Dagan iyo waan waan laga dhex bilaabay dhinacyada dagaalamay xalay
Waxaa saakay dagan Xaaladda magaalada Muqdisho kadib Dagaal socday ku dhawaad 5 saac uu xalay ka dhacay Isgoyska Km4 ilaa afaafka hore ee wadada Madaxtooyadii hore ee C/qaasim ilaa tarabuunka.
Waan-waanta ayaa waxaa wada ra’iisul wasaare Rooble, oo la xiriiray musharaxiin ay ka mid yihiin Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo Xasan Sheekh Maxamuud, una sheegay in dowladda ay dooneyso xabad-joojin iyo heshiis.
C/raxmaan C/shakuur oo warbaahinta qadka taleefanka kula hadlay ayaa sheegay in uu la soo xiriiray Rooble xalay waqti danbe.
“Mar dhexe ayaa ra’iisul wasaaraha ila hadlay oo uu sheegay inuu doonayo in la joojiyo dagaalka, waxaan sidoo kale fahamsanahay inuu wacay Xasan Sheekh, mana hubo inay wada hadleen. Waxaan iri ‘haddaad wax ka qaban karto oo dagaalka joojin karto, oo aad awood leedahay ahlan wa sahlan, soo dhowow’,” ayuu yrii Cabdiraxmaan Cabdishakuur.
Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa intaas ku daray in goor dambe ay soo waceen rag ka socda xafiiska ra’iisul wasaaraha una sheegeen inay ciidankii dagaalka ku jiray ay bixinayaan.
Sidoo kale Waxaa sidoo kale saaka socda dadaallo dheeri ah oo lagu xaqiijinayo in xabadda aysan dib u billaaban, waxaana sidoo kale qeyb ka ah odayaal dhaqameeyo iyo madaxda Galmudug iyo HirShabelle, Axmed Qoor Qoor iyo Cali Guudlaawe.
Previous articleWasiirka warfaafinta Jabuuti, oo waxba kama jiraan ku tilmaamay Eedi uu soo jeediyay Wasiir Dubbe
Next articleCiidamada Daraawiishta Puntland oo Gacanta ku dhigay kaydkii Qaraxyada Al-shabaab Duleedka Boosaaso
Alta White claims to be a natural tooth whitening product that removes plaque by two effective methods, first cleaning and then polishing. Claims to...
Golaha Shacabka Soomaaliya oo been abuur ku tilmaamay warar sheegaya...
Somalia oo laga dareemaye Bilihii la soo dhaafay sare-u-kaca qiimaha hubka...
Farmaajo oo Shirkad u kireestay si uu taageero uga helo Aqalka...
Baarlamaanka Canada oo Qeylo dhaan ka muujiyay sida Xun ee Shiinaha...